Izinto ezi-6 ozozibona eRoma ngempelasonto | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Impelasonto, amaRom
Njengoba sesichithile amaholidi amakhulu, futhi ihlobo lisesekude kakhulu, singaba negebe ngebhuloho noma ngempelasonto ukwenza uhambo olusheshayo lokuya edolobheni elisithandayo. Olunye lohambo enginalo engqondweni, nokuthi uma nginenhlanhla engizokwenza kulo nyaka, lolo amaRom, idolobha eligcwele umlando elinentelezi eheha noma ngubani.
Ngokusobala, sonke siyazicabanga endabeni ejwayelekile lapho sihamba sizungeze iRoma eVespa sibona izindawo ezinhle kakhulu ngaphansi kwelanga elikhulu. Kepha hheyi, kususwa lezo zithombe abasithengisela zona kumamuvi, leli yidolobha elinokuningi okufanele likubone, yebo yebo ungahamba impelasonto eyodwa kuphelaKunconywa ukuthi ucacise ukuthi yiziphi izinto ozozibona, ngaphandle kokulahlekelwa okuthakazelisa kakhulu.
1 IRoma Coliseum
2 Umthombo waseTrevi
3 Iforamu lamaRoma
4 I-Pantheon ka-Agrippa
5 IVilla Borghese
6 Amathuna amathuna
Sikhulume isikhathi eside ngalesi sikhumbuzo esikhulu esise- okuthunyelwe mayelana neColosseum, futhi wukuhambela kokuqala okufanele kwenziwe lapho ufika eRoma. Yisikhumbuzo ebesilokhu simile kusukela ngeminyaka yama-80 futhi esasinda ekuphangeni, ukuzamazama komhlaba ngisho nasezimpini, futhi namanje simile futhi siyamangala abaklami nabavakashi. Ingabamba abantu abangafika ku-50.000 XNUMX, futhi sonke siyayazi imibukiso ye-gladiator nengonyama, kepha kuze kuthiwe kufanele benze izimpi ezihlekisayo zasolwandle, bagcwalisa phansi ngamanzi. Namuhla ingxenye yenkundla ihambile futhi ungabona indawo lapho kwakukhona amakheji futhi lapho kwakuhlala khona ama-gladiator. Bekukhona no-tarps wokuvikela umphakathi elangeni. Njengoba sishilo, ukuvakasha kwayo kubalulekile.
Lo ngumthombo omuhle kunayo yonke iRoma, itshe lesikhumbuzo elingamamitha angama-26 ukuphakama. Umlando wawo uqala ngo-19 AD, lapho lo mthombo wawungukuphela komsele wamanzi i-Aqua Virgo. Kodwa-ke, ukubukeka kwayo kwamanje kubuyela emuva ku-1762, lapho iqedwa nguGiuseppe Pannini. Uma kunokuthile okufanele sikwenze lapho siya eMthonjeni iTrevi, kunjalo aphonse kuye zemali, ngoba kukhona isiko lonke. Kumele idonswe ngesandla sokudla ehlombe langakwesobunxele, futhi kuthiwe uma uphonsa okukodwa uzobuyela eRoma, uma uphonsa amabili uzohlangana nomNtaliyane noma u-Italy, futhi uma uphonsa abathathu uzoshada nalowo muntu wahlangana eRome. Njalo ngonyaka kuye kukhishwe ama-euro ayisigidi futhi asetshenziselwe izinhloso zokusiza.
Lokhu kungenye yezindawo lapho kungcono kakhulu ikhombisa impilo yaseRoma lasendulo neminyaka yegolide yoMbuso WaseRoma. Kule ngxenye yedolobha kulapho kwakwenziwa khona impilo yezenkolo neyomphakathi. Ekuqaleni kwayo, ngekhulu lesi-XNUMX BC, le kwakuyindawo eyixhaphozi eyakhanywa ngenxa yeCloaca Máxima, enye yezinhlelo zokuqala zendle ezaziwayo. Ngenkathi uMbuso ubhidlika le ndawo yawela ekukhohlakalweni nasekulahlweni, yagqitshwa kancane kancane idolobha. Kodwa-ke, yize ubukhona bayo nendawo yayivele yaziwa ngekhulu le-XNUMX, ukumba ukuthola le ngxenye ebalulekile yomlando wamaRoma akuqalanga kwaze kwaba ngekhulu lama-XNUMX.
Lesi sikhumbuzo saziwa kangcono njengePantheon kalula. Ukwakhiwa kwayo kwenziwa ngaphansi kwegunya likaHadrian, ngonyaka we-126 AD, futhi kungukwakhiwa kweRoma lasendulo okulondolozwe kahle. Ngaphandle sibona i-facade enezinsika zegranite.
Kodwa-ke, into ebabazekayo ingaphakathi layo, ene idome enkulu nge-oculus phezulu evumela ukukhanya kwemvelo. Ngaphezu kwalokho, kukhona amathuna amakhosi nemisebenzi yobuciko, ngakho-ke kuzoba ukuvakashelwa okuphelele kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, esigcawini kunezindawo zokudlela ezingenakubalwa zokudla okujwayelekile kwase-Italy ngenkathi sibabaza iPantheon.
Uma ufuna ukusuka empilweni yasemadolobheni kancane, ungaya eVilla Borghese, enye ye izingadi ezinkulu ezisemadolobheni eYurophu, lapho imvelo nayo ihlanganiswe nezikhumbuzo, izakhiwo nemithombo ekhuluma ngomlando waseRoma. Kuyo ungaya eMnyuziyamu waseBorghese, lapho kukhona imisebenzi eyenziwe yiTitian, Caravaggio noma uRaphael. Ungabona futhi i-zoo futhi ujabulele izakhiwo ezinhle ezifana neThempeli lase-Aesculapius. Ngaphezu kwalokho, ivulwa amahora angama-24 ngosuku futhi imahhala ngokuphelele.
Amathuna amathuna aseRoma akha umhlaba wonke ngaphansi komuzi, futhi isukela emuva ekhulwini lesibili leminyaka, lapho amaKristu, engakholelwa enkambeni yobuqaba yokuthwebula izidumbu, engcwaba abafileyo bawo. Inani eliphakeme lomhlaba liholele ekumbeni lawa ma-catacomb anezinwele eziyizinxande. Njengamanje kunamathuna angaphezulu kwamashumi ayisithupha anamakhilomitha ezindawo zemibukiso, kodwa ayisihlanu kuphela avulekele umphakathi, lawo aseSan Sebastián, San Calixto, Priscila, Domitila kanye naseSanta Inés. Ngokusobala, ungabhuka ukuvakasha ngazo ukuze ungaphuthelwa yimininingwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Impelasonto » Izinto ezi-6 ozozibona eRoma ngempelasonto